Who want to know about the Multimedia Usage for their own equipments.
Feel Free to call and discuss your problems !
မင်္ဂလာပါ ခင်ဗျာ !
မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ နည်းပညာအခက်အခဲများကို အိမ်တိုင်ရာရောက်ကျွန်တော်တို့ အဖွဲ့က ဖြေရှင်းပေးဖို့ အသင့်ရှိပါတယ်၊ နည်းပညာပိုင်း ဆိုင်ရာ ဗဟုသုတ အနည်းငယ်ကိုလည်း ဝေမျှထားပါတယ်၊ စိတ်ပါဝင် စားသူတိုင် ၀င်ရောက်လေ့လာနိူင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
I have to support to solve your technical errors. Any time contact me. Depend on your in case of urgency, I have to reply. I will be available after office hours. My office hour is finished after 6:30 pm in week days. Saturday and Sunday will be feel free to call 24/7. You can dropamail to me 24/7. I want to be reply just on time,if any inconvenience occur notify me again. Than you all in advance for your contact.
I can reach all over the world by TeamViewer
If you need my support in urgent, kindly surf to www.teamviewer.com and download the program for FOC. After the installation the teamviewer soft, let me know your TeamViewer ID and Password to assist you in time.
(Will be charged session by session !)
1. Technical Consultant (Online FOC)
2. Standalone Environment (Troubleshooting, Installation)
3. Networking Environment (Troubleshooting,Installation)
4. Data Recovery Service & Virus Cleaning
5. Photo Editing, Graphic Design,Animation Adv for Web & Movie 6. On call and Any Media Service
7. CCTV, DVR and Security system troubleshooting
8. Web Developing and Updating
9. TeamViewer Remote Support ( 20 SGD/One Session)
Remark: Onsite troubleshooting need to be provide travelling allowance ! Depend on your destination
Feel free to call for technical support !
Posted by Nay Linn Aung at 11:46 PM4comments: Links to this post
MP3, MP4 Player Usage
MP3, MP4 Player များကို ကိုယ်တွယ် အသုံးပြုရာတွင် သတိ့ထားရမည့်အချက်များ-
၁။ မိမိ၏ Player များကို PC များ၏အရှေ့ဘက်မျက်နှာစာရှိ USB Port များတွင် အလွယ်တကူ တပ်ဆင်အသုံးပြု ခြင်းမှ ရှောင်ကြည်ပါ။
၂။ Player များအတွင်းသို့မလိုအပ်ဘဲ Data ကူးယူခြင်းမပြု လုပ်ပါနှင့်။
၃။ မဖြစ်မနေ ကူးယူရန်လိုအပ်သော Data များကို Anti Virus Program တစ်ခုခုနှင့် သေချာစွာ စစ်ဆေးပြီးမှ ကူးယူပါ။
၄။ Player များကို PC နှင့်ချိတ်ဆက်အသုံးပြုတိုင်း Virus Check လုပ်ပါ။
၅။ Player များကို မကြာခဏ Format လုပ်ပါက Storage Capacity ကျဆင်းပါသည်။
၆။ Player များကို ရေငွေ့ရိုက်နိုင်သော နေရာများ၊ နေရောင်ခြည်နှင့်တိုက်ရိုက် ထိ့တွေ့သောနေရာများနှင့် ထိမိခိုက်မိနိုင်သော နေရာများတွင် လွယ်လင့်တကူ ထားခြင်းမှရှောင်ကြည်ပါ။
၇။ Player အတွင်းတွင် ထည့်သွင်းအသုံးပြုသော Battery များကို မကြာခဏ စစ်ဆေးပါ။
သို့မှသာ သင့်၏ Player ကိုသက်တမ်းပြည့် သုံးစွဲနိုင်ပါလိမ့်မည်။
Posted by Nay Linn Aung at 2:25 PM 1 comment: Links to this post
Photos/Movies CD & DVD Creation
Photo CD/DVD တစ်ချပ် Burning ပြုလုပ်ရန်အတွက် JPEG Format ကိုသာအသုံးပြုသင့်ပါသည်။ သို့မှသာ Any CD/DVD Player များတွင်ထည့်သွင်း ကြည့်ရှုရန် အဆင်ပြေမည်ဖြစ်သည်။ Photo Album CD တစ်ချပ်ပြုလုပ်ရန်အတွက် Software များစွာရှိသည့်အနက် Mediatox မှရေးသားဖြန့်ဖြူးသော Aurora Media Workshop Software သည်ဘက်စုံအသုံးပြုနိူင်သော Media Software တစ်ခုဖြစ်သည်။ Software နှင့် သင်ဆိုင်သောအချက်အလက်များကို www.mediatox.com တွင်ဝင်ရောက် ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။ Photo DVD များကိုလည်း အထက်ဖော်ပြပါ Media Software ကိုအသုံးပြု၍ လွယ်လင့်တကူ ကူးယူနိူင်ပါသည်။
DVD အချပ်များတွင် Single Layer နှင့် Double Layer ဟူ၍နှစ်မျိုးနှစ်စား ရှိပါသည်။ Single Layer DVD သည်သိုလှောင်နိူင်မှုပမာဏအားဖြင့် CD (၈) ချပ်စာရှိပြီး Double Layer DVD တွင်သိုလှောင်နိူင်မှုပမာဏ CD (၁၆) ချပ်စာရှိပါသည်။ ယခုခေတ်စာနေသော (၉)ကား၊ (၁၂)ကား အစရှိသည့် Double Layer DVD များတွင်ထည့်သွင်းထားသော Movies များသည် MP4 Format ဖြင့်ပြုလုပ်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ Movie Format များတွင် MP4 Format ဖြင့် Compile လုပ်ပါက File Size သေးငယ်သွားသကဲ့သို့ Audio Format များတွင်လည်း MP3 Format ဖြင့် Compile လုပ်ပါက Original Size ၏ (၁၀)စမျှသေးငယ်သွားမည်ဖြစ်သည်။
Posted by Nay Linn Aung at 3:06 PM 1 comment: Links to this post
Photo Editing ပြုလုပ်ရန်အတွက် အသင့်တော်ဆုံးနှင့် အမှန်ကန်ဆုံးရွေးချယ်သင့်သော Graphic Software မှာ Adobe Photoshop ဖြစ်ပါသည်။ Shooting တစ်ခုမှရိုက်ကူးပြီးသော Photos များကို Photo Technology အရ Exposure, Lighting & Brightness များကိုချိန်ညှိနိူင်ရန်အတွက် Options မျိုးစုံစွာပါရှိပါသည်။ ပုံဟောင်း၊ ပုံဆွေးများကို Retouching ပြုလုပ်ရာတွင် Photo နှင့်တွဲဖက်အသုံးပြုနိူင်သော Plug-in များ၏အခန်းကဏ္ဍမှာလည်း အံမခန်းပင်ဖြစ်သည်။
ယခုမျက်မှောက်ခေတ် Professional Photographers များ၏လက်စွဲတော်သံလျှက်မှာ Adobe မှနောက်ဆုံးရေးသားထုတ်ဝေသော Adobe Photos CS3 ပင်ဖြစ်ပါသည်။ Adobe မှပြုလုပ်သော Software များအတွက် Adobe Professional Online Exam များကိုလည်း မိမိတို့တက်ကျွမ်းနားလည်း၊ လေ့လာလိုက်စားခြင်း တို့အပေါ်အခြေခံ၍ ဖြေဆိုနိူင်ပြီးဖြစ်သည်။ Adobe Products များနှင့်ပတ်သက်သော သတင်းအချက်အလက်များကို www.adobe.com တွင်ကြည့်ရှုနိူင်ပါသည်။
Posted by Nay Linn Aung at 10:34 AM No comments: Links to this post
Basic Digital Camera Usage
Digital Camera အများစုသည် ပုံရိုက်ယူရန်အတွက် Storage Card လိုအပ်ပါသည်။ (ဥပမာ- CF, MMC, SD…etc) စသည်ဖြင့် အမျိုးအစားများစွာ ရှိသည့်အနက်၊ မိ့မိ့ပိုင်ဆိုင်သော Digital Camera သည် မည်သည့်အမျိုးအစား ကိုအသုံးပြုသည်ကို တိ့ကျသေချာစွာ သိရှိရန်လိုအပ်ပါသည်။
Digital Camera များသည်ပုံရိုက်ယူပြီးသည်နှင့် Camera အတွင်းရှိ Storage Card များအတွင်းတွင် Folder တစ်ခု Create လုပ်ပြီးသိမ်းဆည်းထားပါသည်၊ Card ထဲမှပုံများကို Personal Computer ထဲသို့ကူးယူပြီးပါက Card အတွင်းရှိ Folder အားလုံးကို Delete လုပ်နိူင်ပါသည်။
မှတ်ချက်။ ။ မိ့မိ့တို့အသုံးပြုသော Card များကို မကြာခဏ Format လုပ်ခြင်းသည် Card ၏ Storage Capacity ကိုလျှော့နည်းစေပါသည်။Digital Camera များကိုလည်း အပူချိန်မြင့်မားလွန်းသောနေရာများ၊ ရေငွေ့ရိုက်နိူင်သောနေရများနှင့် ထိခိုက်လွယ်သောနေရာများတွင် အလွယ်တကူထားခြင်းမှ ရှောင်ကြည်ရန်လိုအပ်ပါသည်။
Posted by Nay Linn Aung at 2:19 PM No comments: Links to this post
Basic Multi Medias Facts
မာလ်တီမီဒီယာနှင့် စက်ဆပ်ပစ္စည်းများကို တွဲဖက်အသုံးပြုလိုသော User များနေဖြင့် မိမိတို့ကိုယ်ပိုင် မာလ်တီမီဒီယာ စက်ဆပ်ပစ္စည်းများ၏ သဘောသဘာဝကို သေချာတိ့ကျစွာ သိ့ရှိရန်လိုအပ်ပါသည်။
1. Digital Camera Usage (Still Portable or Professional)
မိမိတို့ရိုက်ကူးထားသော Digital Photos များကို Personal Computer အတွင်း၌ သိမ်းဆည်းလိုပါက Digital Card Reader ကိုအသုံးပြု၍ Data Storage များဖြစ်သော (Hard Disk, CDR, DVDR) များအတွင်းထည့်သွင်း သိမ်းဆည်းနိူင်ပါသည်။
Digital Photos များကိုသိမ်းဆည်းရန် အလွန်လွယ်ကူ ရိုးရှင်းသောနည်းလမ်းမှာ မိမိကိုယ်ပိုင် Personal Computer အတွင်းရှိ Hard Disk တွင် Data Pertation တစ်ခုခွဲ၍ သိမ်းဆည်းနိူင်ပါသည်။
ဥပမာ - Data Pertation ၏ Drive Letter သည် D:/> ဖြစ်သည်ဆိုပါက D:/My Photos/> ဟူ၍ Main Folder Name ကို My Photos ဟုပေးပြီး ၄င်း Folder ၏အောက်တွင် ရိုက်ကူးခဲ့သော Day & Date များအရ Sub Folder များခွဲ၍သိမ်းဆည်းထားပါက လွယ်ကူစွာ ရှာဖွေကြည့်ရှု ပုံထုတ်ယူနိူင်မည်ဖြစ်သည်၊
Posted by Nay Linn Aung at 10:50 AM No comments: Links to this post
For Myanmar Blogger
Java Script Provide By Mg Yoe
Free Surfing Tech
From Myanmar Talk
TriGem Technical Team